Shiinaha SPC Dabaqa SM-053 Soo-saar iyo Warshad | Dheeraad ah
Faahfaahinta: 1210 * 183 * 5.5mm
Dabaqa SPC waa nooc cusub oo dabaq ah, oo sidoo kale loo yaqaanno dabaqa caagga ah ee dhagaxa ah. Qalabkeeda aasaasiga ahi waa guddi isku dhafan oo ka samaysan budada dhagaxa ah iyo qalabka polymer-ka thermoplastic-ka ka dib markii si siman loo qaso ka dibna looga saaro heerkulka sare. Isla mar ahaantaana, waxay leedahay astaamaha iyo astaamaha qoryaha iyo balaastigga si loo hubiyo xoogga iyo adkaanta dabaqa. Dabaqa SPC waxaa laga soo dheegtay gaabinta dhagaxa isku dhafka ah ee dhagaxa, oo sidoo kale loo yaqaanno dabaqa caaga dhagaxa ah.
Waa maxay sheyga SPC
Dabaqa SPC badanaa wuxuu ka samaysan yahay budada kalsiyum ahaan maadada ceyriinka ah iyo xaashida laga soo saaray bacriminta. Waxay ka kooban tahay SPC polymer lakabka, lakabka PUR Crystal Shield lakabka hufan, lakabka u adkaysta, lakabka qurxinta filimka midabka ah iyo lakabka dib u celinta jilicsan iyo aamusnaanta.
Hordhaca heerka qaran ee SPC gogosha waqtigan, heerka qaran ee adag PVC Gogosha GBT waxaa loo sameeyaa SPC sagxadda Shiinaha 34440-2017, heerka ayaa qeexaya shuruudaha iyo qeexitaannada, kala soocidda, aqoonsiga sheyga, shuruudaha, hababka imtixaanka iyo kormeerka xeerarka, iyo sidoo kale sixitaanka, baakadaha, gaadiidka iyo kaydinta gogosha adag ee PVC. Heerkani wuxuu khuseeyaa sagxadda dhulka oo leh saxanka xaydha PVC sida sheyga ceyriinka ugu weyn oo loo isticmaalo gogosha gudaha iyadoo la marsado dusha sare.
Faa'iidooyinka: 1, ilaalinta deegaanka iyo xaraashka 'formaldehyde', dabaqa SPC ee habka wax soo saarka oo aan lahayn xabag, sidaa darteed kuma jiraan formaldehyde, benzene iyo walxaha kale ee waxyeelada leh, dhabta 0 dabaq cagaaran ee rasmiga ah, waxyeello uma geysan doono jirka aadanaha. 2. Biyo-ma-aan iyo qoyaan-u-ekeyn, dabaqa SPC wuxuu leeyahay faa'iidooyinka biyo-caddeyn, qoyaan-celin iyo caddeyn-caarid, taasoo xallisa cilladaha dabaqa alwaax-dhaqameedka ee ka cabsanaya biyaha iyo qoyaanka, sidaa darteed dabaqa SPC waxaa lagu goglan karaa musqusha jikada iyo balakoonka. 3. Miisaanka waa fududahay in la qaado, dabaqa SPC waa mid aad u fudud, dhumucdiisuna waxay u dhaxeysaa 1.6mm-9mm, culeyska halkii jibbaar waa 2-7.5kg oo kaliya, taas oo 10% ka ah miisaanka sagxadda caadiga ah.
Guud ahaan dhumucdiisuna 5.5mm
Qeexitaanka cabbirka 1210 * 183 * 5.5mm
Hore: SPC Dabaqa SM-052
Xiga: SPC Dabaqa 501
SPC Dabaqa SM-052
SPC Dabaqa SM-050
SPC Dabaqa SM-051
SPC Dabaqa SM-058